Sucuudiga Oo Markii Ugu Horreysay Dumarka U Ogaaladay Dal Ku Gal “Maxram” La’aan ah | Puntlandi.ca
Home Wararka Maanta Sucuudiga Oo Markii Ugu Horreysay Dumarka U Ogaaladay Dal Ku Gal “Maxram” La’aan ah
Sucuudiga Oo Markii Ugu Horreysay Dumarka U Ogaaladay Dal Ku Gal “Maxram” La’aan ah
Dowladda Sucuudigaayaa KhamiistiiJanuary 11, ku dhawaaqday go’aan ay dumarka da’doodu 25 jirak ka weyn tahay loogu ogolaanayo visa-ha dalka ku galka Sucuudiga iyadoo aan lagu xirayn maxram oo kaligood ay u safri karaan visa dalxiis oo mudadiisu tahay 30cisho oo qura.
Jariidada “Arabnews” ee kasoo baxda gudaha Sucuudiga oo soo xiganaysay afhayeen u hadlay ha’adda dalxiiska iyo hiddaha Sucuudiga ayaa jariidada u sheegay iney go’aan sadeen in dumarka u ogolaadaan iney siiyaan visa dalxiis oo dumarka ajanibaga ah ee da’doodu ka badan tahay 25 jirka, iyadoo aan lagu xirayn maxram si ay Sucuudiga u galaan.
Goddoomiyaha hay’adda dalxiiska Sucuudiga Cumar Mubaarak ayaa caddeeyay in visa-ha dalxiiska loosoo saari doono qof kaliya, mudadiisuna ay tahay 30 cisho, waxayna ka duwan tahay visa-ha shaqada, Xajka, Cumarada iyo visa siyaarada.
Go’aankan ayaa ka dambeeyay aragtida Sucuudiga ee 2020 oo ah mashruuc la doonayo in lagu kordhiyo maalgashiga iyo dalxiiska boqortooyada Sucuudiga.
Si kastaba, Dalka Sucuudiga ayaan loo ogolaan jirin dumarka aanuu maxram la socon, laakiin hadda ay u suurtogalayso iney hawenaydu kaligeed u safri karto dalkaasi, waa haddii ay dalxiis tahay.